रबिन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ : कुलमानलाई दो’स्रो कार्यकाल नदिनु भनेको भ्र’ष्ट राजनीतिको च’रम नमूना हो…सेयर गरौ ! – Gandaki Chhadke Nepal
September 16, 2020 News DeskLeaveaComment on रबिन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ : कुलमानलाई दो’स्रो कार्यकाल नदिनु भनेको भ्र’ष्ट राजनीतिको च’रम नमूना हो…सेयर गरौ !
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुन’र्नियु’क्ति नदिएपछि अहिले चौतर्फी वि’रोध भइरहेको छ ।
दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसे’डिङ अन्त्य र विद्युत चु’हावट कम गर्न सकेका घिसिङलाई सामाजिक संजा’लमा सर्व’साधारण, कलाकार लगायतले प्रा’धिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन नियु’क्ति दिन माग गरिरहेका छन् ।
भने प्राधिकरणको कार्य’कारी निर्देशकमा निर’न्तरता पाउनुपर्ने माग राख्दै उनको पक्षमा र्याली पनि निकालिएका छन् । यसैबीच साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले कुलमानलाई दो’स्रो का’र्यकाल नदिनु भनेको भ्र’ष्ट राजनीतिको च’रम नमूना रहेको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक स’ञ्जालमा कुलमानले असा’धारण काम गरेको बताउदै उनलाई दो’स्रो कार्य’काल नदिनु भनेको भ्र’ष्ट राजनीतिको च’रम नमू’ना भएको बताएका छन् । उनले भने अन्त’र्राष्ट्रिय सं’स्थामा २ वर्षको करारसेवा दिइन्छ। राम्रो काम गरे र नियमले नरोक्ने भए त्यसलाई खुशीसाथ नवि’करण ।
नराम्रो गरे त्यही क’रारका श’र्तलाई देखाएर तिम्रो करा’रसेवा टुङ्गि’योू भनिन्छ। कुलमानजीले त असाधारण काम गरेका हुन्। उनलाई दो’स्रो का’र्यकाल नदिनु पद्द’ति होइन भ्र’ष्ट राजनीतिको च’रम नमूना हो।’
महाकाली सन्धिमा कुनै राष्ट्रघात भएको छैन : वरिष्ठ नेता पौडेल
June 24, 2020 News Desk
अध्यक्ष प्र चण्डको सु रक्षार्थ ख टिएका ६ जना सु रक्षाकर्मीमा को रोना
August 6, 2020 August 6, 2020 News Desk